Ikpochapụ Data si gam akporo ntị na mbadamba - The Easy Way .
Android echekwa a otutu ndabere data, nke igafe nwere ike weghara nnukwu ohere na ngwaọrụ gị. Ị ga-ekpochapụkwa ha. E nwere ọtụtụ ụdị nke data dị ka cache, clipboard, download ndia, na-emeghe na taabụ, na ndị ọzọ na faịlụ. Onye ọ bụla n'ime ndị a na ụdị nwere ike sụrụ na ole na ole dị mfe nzọụkwụ.
Part 1. Olee ikpochapụ defaults na Android
Android-enye gị ohere ikpochapụ defaults ziri ezi na ngwa faili. Defaults bụ ngwa na-emepe ma ọ bụ na-eme otu ọrụ kpọmkwem. Ha na-akpaghị aka ẹkedori mgbe ụfọdụ omume na-achọrọ si ọgwụgwụ gị. Lee ndị nzọụkwụ ikpochapụ defaults na Android.
Obula na ị chọrọ ikpochapụ defaults, dị nnọọ emeghe ntọala, na-aga ngwa.
Chọọ maka ngwa, nke ị na-achọghị launching dị ka ndabere. Ọbụna tupu ịmalite nzọụkwụ ndị a na-eme n'aka na nke ngwa ị na-wepụ dị ka ndabere. Ị nwere ike swipe nri ma ọ bụ aka ekpe ka ịgbanwee n'etiti ngwa anatara nke ebudatara ngwa, nile ngwa ma ọ bụ na-agba ọsọ ngwa.
Ugbu a, enweta na-eji ngwa gaa App Ama. Pịgharịa gaa na-ahụ "Clear Ndi an-kpọ" button. Dị nnọọ pịnye na ya na ndabere ga-ekpocha.
Part 2. Olee ikpochapụ clipboard si gam akporo
Mgbe ọ bụla ị idetuo na mado ihe na ngwaọrụ gị, ndeputa na echekwara ya na clipboard. Nke a clipboard data nwere ike sụrụ site ekpocha cache nke ngwa. Ikpochapụ cache nke ọ bụla dị mfe ike mere si ọnọdụ. Lee ndị nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso:
Mepee ntọala na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba na-aga ngwa.
Pịgharịa site na ngwa ndepụta ịchọta ngwa.
Enweta na ngwa na-emeghe App Ama. E nwere, ị pụrụ ịhụ dị iche iche ozi banyere ngwa - adịghị ichegbuwe onwe, dị nnọọ n'ihe bụ dị gị mkpa. I nwekwara ike ihe bụ size nke oghere. Iji kpochapụ ihe cache, enweta na Doro Anya Cache.
Part 3. Olee iji kpochapụ ihe download ndekọ si gam akporo?
Mgbe ọ bụla ị download ihe, download na-dere na gị Android ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ a download akụkọ ihe mere eme na bụghị ebudatara faịlụ, ọ pụrụ ime ya. Ị nwere ike iji My Files ngwa, nke a na-etinyegoro na gam akporo. Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme ga-ghara ihichapụ faịlụ ma dị nnọọ dekọọ nke download eme. Ebe a na-mfe nzọụkwụ maka nbudata na akụkọ ihe mere eme:
Mepee My Files na ngwa na-aga Download History. Niile download ndekọ nke internet ngwa dị.
Ugbu a na ndepụta nke faịlụ ndị ibudatara ga-abụ dị gị. Long enweta na download faịlụ ga-enye ole na ole nhọrọ dị họrọ Nhichapụ akara ngosi. Nke a ga-ihichapụ ihe mere eme. I nwekwara ike ihichapụ multiple faịlụ site ogologo mgbata na otu faịlụ ma mgbe ahụ otu mgbata na ndị ọzọ.
Part 4. Olee imechi na taabụ na Android
Ọ bụrụ na ị na-eji chrome ma ọ bụ ndị ọzọ nchọgharị na gị android ngwaọrụ, ị na-arụ ọrụ dị iche iche na taabụ. Mgbe ụfọdụ na taabụ nwere ike inwe mmadụ jupụtara na ike igbochi gị na-eme nchọgharị na ahụmahụ. Ya mere, ị ga-emechi ha. Otú ọ dị, e nwere ụzọ dị iche iche imechi na taabụ na Android igwe na mbadamba. Ọbụna dị iche iche android nsụgharị nwere dị iche iche functionalities. Lee ndị ụzọ nke ị nwere ike na-emechi na taabụ na dị iche iche android nsụgharị na ngwaọrụ:
Ekwentị mkpanaaka na-eji Android 4.4 ma ọ bụ ala
Mgbe ị na-eji Chrome na ọnụ ọgụgụ nke taabụ oghe, na nri akuku e akara ngosi na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke tab oghe. Enweta na ya na-ele taabụ na onye ọ bụla taabụ nwere "X" dị mfe na nri akuku. Dị nnọọ emetụ ya aka imechi taabụ.
2. Android 5 ma ọ bụ karịa
Na ala nri akuku nke gị na ihuenyo, ị nwere ike taabụ switcher icon, nke anya dị ka square. Dị nnọọ enweta na ya na-ele-emeghe taabụ. Dị nnọọ Swipe ekpe imechi taabụ ma ọ bụ enweta na "X" imechi taabụ.
Mmechi na taabụ na mbadamba
Dị nnọọ ka ị na-emechi na taabụ na kọmputa, mbadamba na-nwere otu arụmọrụ. Onye ọ bụla taabụ nwere cross ịrịba ama na akuku nke ọ bụla taabụ. Enweta na ya na-emechi taabụ.
Olee otú ikpochapụ ohere na Android? Iji ohere na gị Android na e nwere otu ihe ngwọta, nke ị nwere ike iji. Ọ bụ WonderShare si MobileGo. Iji a dị mfe software i nwere ike ọcha ngwaọrụ gị na ala.
Ebe a na-ha atụmatụ:
Ị nwere ike ijikwa gị medial faịlụ na ala.
Mkpanaaka gị utilities dị ka oyiri kọntaktị, ịmafe ngwaọrụ, ngwa collection, na nkwado ma weghachite wdg nwere ike jisiri-eji nke a software.
Elu atụmatụ-enye gị ohere iji naghachi ehichapụ faịlụ, dịkwuo ngwaọrụ arụmọrụ ma melite ohere.
Ọ-arụ ọrụ niile ngwaọrụ.
Part 5. Olee ikpochapụ ohere na Android
Iji ohere na gị Android na e nwere otu ihe ngwọta, nke ị nwere ike iji. Ọ bụ WonderShare si MobileGo. Iji a dị mfe software i nwere ike ọcha ngwaọrụ gị na ala. Ebe a na-ya atụmatụ:
Ọ okosobo Ram, ọrụ na-egbu, ngwa agbam ume, na ọcha ekwentị junk data.
App ewe kacha nta akụ nke ekwentị gị.
Ị nwere ike ihichapu ị media ndị ọzọ na nnukwu faịlụ site na ngwa.
Ị nwere ike ijikwa ị ngwa ọdịnala na ala eji ngwá ọrụ a
Ebe a bụ otú i nwere ike iji Mobile aga doro anya ohere na gị na ngwaọrụ:
Ẹkedori ngwa na ekwentị gị. Akpa gaa ekwentị Cleaner. Ọ na-akpaghị aka na-enyocha usoro cache, ngwa cache, nzuzo ndia na ndị ọzọ na junk faịlụ. Dị nnọọ enweta na ya ọcha faịlụ.
2. Ugbu a gaa n'ụlọ peeji nke ọzọ. Swipe hapụrụ dọpụtaara elu nhọrọ. E aga ịzọpụta ohere nhọrọ.
3. Ọ ga-emeghe elu ọhụrụ na ihuenyo, nke na-egosi dị iche iche faịlụ na ekwentị gị nke nwere nnukwu faịlụ size. Ị nwere ike họrọ n'otu n'otu ma hichapụ faịlụ.
Otú a, ị ga-abụ doro na-enweghị isi data na ichekwa gị ụfọdụ ohere.
Ọ dị mfe ikpochapụ data gị Android ekwentị. Ị nwere ike-agbalị ime ya na lengthier ụzọ ma ọ bụ dị na-eji Wondershare. Na Wondershare, na-ekpocha data nwere ike mere ole na ole clicks na ị na-n'aka hụrụ ya n'anya.
> Resource> Clean-elu> ekpocha Data si gam akporo ntị na mbadamba - The Easy Way